MM Live News - Page 489 of 578 - MEDIA AND ENTERTAINMENT
October 19, 2018 MM Live News9 Comments on ဧရာဝတီတိုင်းက ကာမလိမ်လည် မုဒိန်းမှုဖြစ်စဉ် အပြည့်အစုံ
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ငပုတောမြို့နယ် အထက်ပြွန်ကျေးရွာတွင် ကာမလိမ်လည် မုဒိန်းမှုဖြစ် ပွားကြောင်းသိရှိရ ဖြစ်ပွာစဉ်မှာ ၊ လွန်ခဲ့သော နှစ်လခန့်မှ မ——–(ဘ)ဦ———-နှင့် ဒေါ်———- သမီး အသက် ၁၅နှစ် ၄လ အဋ္ဌမတန်း ကျောင်းသူလေးအား မြတ်သူအောင် အမည်ဖြင့် ဖုန်းဆက်၍ ခန ခဏဖုန်းဆက်ခြင်းကြောင့် လူချင်းမမြင်ဘူး ပေမဲ့ အသံမှတ်မိနေခဲ့ကြောင်း မြတ်သူအောင် ဆိုသူမှလည်း ရန်ကုန်မြို့တွင်နေထိုင် ကြောင်း ပြောပြ၍သိရပါသည် 23-9-2018 ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့မှ လာမည်ဟုပြောကြားကာ သမီးအားဖုန်းဆက်ခဲ့ကြောင်း ထိုည ၁ နာရီ ခန့်တွင် ဖုန်းခေါ်သဖြင့်လန့်နိုးခဲ့ကြောင်း ထိုနောက် ရန်ကုန်မှ ရောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် လူခြင်းမြင်ဖူးခြင်ကြောင်း ပြောကြားကာ အိမ်ရှေ့သို ခေတ္တ ခဏထွက်ခဲ့ဖို့ ပြောကြားကြောင်း သမီးမှလည်းထွက်ခဲ့မိကြောင်းထိုသို့ ထွက်ခဲ့စဉ် သမီးတို့ နှစ်အိမ်ကျော်မှ မိန်းမရှိတဲ့ […]
မြန်မာမှာ နောက်ဆုံးထိုးသတ်ပွဲလိုဆိုတဲ့ အောင်လအန်ဆန်၊ သုံးချီအတွင်း အပြတ်ထိုးမယ်
October 19, 2018 MM Live NewsLeaveaComment on မြန်မာမှာ နောက်ဆုံးထိုးသတ်ပွဲလိုဆိုတဲ့ အောင်လအန်ဆန်၊ သုံးချီအတွင်း အပြတ်ထိုးမယ်
ဝမ်းမစ်ဒယ်ဝိတ်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံခါးပတ်ကို ကာကွယ်မည့် အောင်လအန်ဆန်က မိုဟာမတ်ခရာခီနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်ရန်အတွက် အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်နေ့၊ နံနက် ၆ နာရီက ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိလာစဉ်မြင်တွေ့ရပုံ။ (ဓာတ်ပုံ – သက်ကို/မဇ္ဈိမ) ONE: Pursuit of Greatness ပွဲကို အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၁၉ ။ ။ အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်နေ့မှာ စိန်ခေါ်သူ လက်ဘနွန်နိုင်ငံသား မိုဟာမက်ခရာခီနဲ့ ထိုးသတ်မယ့်ပွဲဟာ သူ့အတွက် မြန်မာပြည်မှာ နောက်ဆုံးထိုးသတ်မယ့်ပွဲ ဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာပြည်ဖွား ကချင်တိုင်းရင်းသား ဝမ်းမစ်ဒယ်ဝိတ် ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ဖြစ်သူ အောင်လအန်ဆန်က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ “ဆက်အားပေးနော်၊ ဆက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်ကို ကြိုးစားပြီးတော့ အားပေးပါ။ အားလုံးကို […]
အိမ်ထောင်ကိုယ်စီရှိပါလျက်ဖောက်ပြန်သူတွေထောင်ခြောက်နှစ်စီ ကျသွားပြီနည်းလား များလား ပြောကြည့်
October 19, 2018 MM Live News6 Comments on အိမ်ထောင်ကိုယ်စီရှိပါလျက်ဖောက်ပြန်သူတွေထောင်ခြောက်နှစ်စီ ကျသွားပြီနည်းလား များလား ပြောကြည့်
ဖောက်ပြန်သူတွေထောင်ခြောက်နှစ်စီ ကျသွားပြီနည်းလား များလား ပြောကြည့် အိမ်ထောင်ကိုယ်စီရှိပါလျက်အိမ်ထောင်ရေး ဖေါက်ပြန်ခဲ့ကြသည့်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့အားတစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ-၁၃ အရအလုပ်ဖြင့်ထောင်ဒဏ်(၆)နှစ်စီကျခံစေရန်အမိန့်ချမှတ်လိုက်ပြီ။ ကသာမြို့နယ်၊လိပ်ထုံးကျေးရွာတွင်နေထိုင်သူဦးဘိုလေးအသက်(၄၉)နှစ်နှင့်မအေးရီ(အသက် ၂၈နှစ်)တို့သည်လိပ်ထုံးရွာတွင်လမ်းခြားပြီးမျက်နှာချင်းဆိုင်နေထိုင်ကြသူများဖြစ်သည်။ ဦးဘိုလေးတွင်ဇနီးနှင့်သားသမီး(၆)ဦးရှိသည်။မအေးရီတွင်ခင်ပွန်းနှင့်သားသမီး(၂)ဦးရှိသည်။မအေးရီသည်ခင်ပွန်းဖြစ်သူဖားကန့်သို့အလုပ်သွားလုပ်စဉ်ဦးဘိုလေးနှင့်ဖေါက်ပြန်နေထိုင်ခဲ့သည်။ထိုသတင်းကို ၂၀၁၇၊ဒီဇင်ဘာလ၌ခင်ပွန်းဖြစ်သူကသတင်းရသော်လည်းခွင့်မရ၍မပြန်နိုင်ခဲ့ပေ။ ၄-၄-၂၀၁၈နေ့၌လိပ်ထုံးရွာသို့တိတ်တဆိတ်ပြန်လာအကဲခပ်ကြည့်ရှုရာနေအိမ်တွင်ဦးဘိုလေးနှင့်မအေးရီတို့လင်မယားသဖွယ်နေထိုင်ကြကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။(၅-၄-၂၀၁၈)ရက်နေ့ည(၁၁)နာရီခန့်တွင်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများ၊နှစ်ဖက်ဆွေမျိုးများကဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးပြီးရဲစခန်းသို့အပ်နှံကာမအေးရီ၏ခင်ပွန်းကတရားလိုပြုလုပ်အမှုဖွင့်တိုင်ကြားခဲ့သည်။ (၄-၅-၂၀၁၈)နေ့တွင်ကသာမြို့နယ်တရားရုံးသို့တရားစွဲဆိုတင်ပို့ခဲ့သည်။စစ်ဆေးချက်အရအိမ်ထောင်ရှိပါလျက်ဖေါက်ပြန်နေထိုင်ကြောင်းပေါ်ပေါက်သဖြင့်တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ-၁၃အရအလုပ်ဖြင့်ထောင်ဒဏ်(၆)နှစ်စီကျခံကြစေရန်(၂၄-၈-၂၀၁၈)ရက်နေ့ကအမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ Credit AK ====================== ဖောကပြှနသြူတှထေောငခြှောကနြှစစြီ ကသွှားပှီနညြးလား မွားလား ပှောကှညြ့ အိမထြောငကြိုယစြီရှိပါလကွအြိမထြောငရြေး ဖေါကပြှနခြဲ့ကှသညြ့အမွိုးသားနှငြ့အမွိုးသမီးတို့အားတစလြငတြစမြယားစနစကြငွ့သြုံးခှငြးဆိုငရြာဥပဒပေုဒမြ-၁၃ အရအလုပဖြှငြ့ထောငဒြဏြ(၆)နှစစြီကခွံစရနေအြမိနြ့ခမွှတလြိုကပြှီ။ ကသာမှို့နယြ၊လိပထြုံးကွေးရှာတှငနြထေိုငသြူဦးဘိုလေးအသကြ(၄၉)နှစနြှငြ့မအေးရီ(အသကြ ၂၈နှစြ)တို့သညလြိပထြုံးရှာတှငလြမြးခှားပှီးမကွနြှာခငြွးဆိုငနြထေိုငကြှသူမွားဖှစသြညြ။ ဦးဘိုလေးတှငဇြနီးနှငြ့သားသမီး(၆)ဦးရှိသညြ။မအေးရီတှငခြငပြှနြးနှငြ့သားသမီး(၂)ဦးရှိသညြ။မအေးရီသညခြငပြှနြးဖှစသြူဖားကနြ့သို့အလုပသြှားလုပစြဉြဦးဘိုလေးနှငြ့ဖေါကပြှနနြထေိုငခြဲ့သညြ။ထိုသတငြးကို ၂၀၁၇၊ဒီဇငဘြာလ၌ခငပြှနြးဖှစသြူကသတငြးရသောလြညြးခှငြ့မရ၍မပှနနြိုငခြဲ့ပေ။ ၄-၄-၂၀၁၈နေ့၌လိပထြုံးရှာသို့တိတတြဆိတပြှနလြာအကဲခပကြှညြ့ရှုရာနအေိမတြှငြဦးဘိုလေးနှငြ့မအေးရီတို့လငမြယားသဖှယနြထေိုငကြှကှောငြးတှရှေိ့ခဲ့ရသညြ။(၅-၄-၂၀၁၈)ရကနြညေ့(၁၁)နာရီခနြ့တှငကြွေးရှာတာဝနရြှိသူမွား၊နှစဖြကဆြှမွေိုးမွားကဝိုငြးဝနြးဖမြးဆီးပှီးရဲစခနြးသို့အပနြှံကာမအေးရီ၏ခငပြှနြးကတရားလိုပှုလုပအြမှုဖှငြ့တိုငကြှားခဲ့သညြ။ (၄-၅-၂၀၁၈)နတှေ့ငကြသာမှို့နယတြရားရုံးသို့တရားစှဲဆိုတငပြို့ခဲ့သညြ။စစဆြေးခကွအြရအိမထြောငရြှိပါလကွဖြေါကပြှနနြထေိုငကြှောငြးပေါပြေါကသြဖှငြ့တစလြငတြစမြယားစနစကြငွ့သြုံးခှငြးဆိုငရြာဥပဒပေုဒမြ-၁၃အရအလုပဖြှငြ့ထောငဒြဏြ(၆)နှစစြီကခွံကှစရနြေ(၂၄-၈-၂၀၁၈)ရကနြကေ့အမိနြ့ခမွှတခြဲ့ပါသညြ။ Credit AK
October 19, 2018 MM Live News36 Comments on ဖုန်းပွတ်နေတဲ့ မိခင်ကြောင့် ရထားအောက် ရောက်သွားတဲ့ သမီးငယ် (ရုပ်သံ)
Zawgyi မိခင်တစ်ဦးဟာ ကလေးကို ဂရုမစိုက်ပဲ ဖုန်းကိုပဲ အာရုံစိုက်ပြီး ပွတ်နေခဲ့တာကြောင့် သူမရဲ့ သမီးငယ်လေးဟာ ရထားဘူတာ စင်္ကြန်နဲ့ ရထားကြားက အပေါက်ထဲကနေတစ်ဆင့် ရထားအောက်ထဲ ပြုတ်ကျသွားခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်နေ့က တရုပ်နိုင်ငံ ဘေဂျင်းမြို့ ရထားဘူတာရုံမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ဗီဒီယိုထဲမှာ ဆောက်တည်ရာမရငိုယိုနေတဲ့ မိခင်ဟာ ရထားအောက်ထဲကို ကုန်းပြီး သမီးဖြစ်သူကို ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ ကလေးကလည်း ရထားအောက်ထဲမှာ ကြောက်ရွံပြီး မိခင်ကို ပြန်အော်ခေါ်နေခဲ့ပါတယ်၊ ရထားနဲ့ ပလက်ဖောင်းကြားထဲကို လက်နှိုက်ပြီး သမီးကို ကယ်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် မလွယ်ကူခဲ့ပါဘူး။ ခဏအကြာမှာ အားလုံးက ဝိုင်းဝန်းကူညီခဲ့တဲ့အတွက် ကလေးကို ရထားစင်္ကြန်ပေါ် ရောက်အောင် ပြန်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူမရှိသလို ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုလည်း မဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ သိရှိရပါတယ်။ ယင်းကဲသို့ […]
ကျောက်ဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး၏​မေတ္တာ ကြီးမားပုံတို့ကို စွမ်းနိုင်သလောက်ရိုက်ကူးမှတ်တမ်းပြုထားတဲ့ပုံရိပ်​​လေးပါခင်​ဗျာ.. .
October 19, 2018 MM Live News14 Comments on ကျောက်ဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး၏​မေတ္တာ ကြီးမားပုံတို့ကို စွမ်းနိုင်သလောက်ရိုက်ကူးမှတ်တမ်းပြုထားတဲ့ပုံရိပ်​​လေးပါခင်​ဗျာ.. .
[Zawgyi] ကျောက်ဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး၏​မေတ္တာ ကြီးမားပုံတို့ကို စွမ်းနိုင်သလောက်ရိုက်ကူးမှတ်တမ်းပြုထားတဲ့ပုံရိပ်​​လေးပါခင်​ဗျာ.. . Video ဗီဒီယိုခရက်ဒစ် ဓမ္မရတနာ [Unicode] ကြောကျဂူဆရာတျောဘုရားကွီး၏မတ်ေတာ ကွီးမားပုံတို့ကို စှမျးနိုငျသလောကျရိုကျကူးမှတျတမျးပွုထားတဲ့ပုံရိပျလေးပါခငျဗြာ.. . ဗီဒီယိုခရကျဒဈ ဓမ်မရတနာ
​ကျောက်​ဂူဆရာ​တော်​ဘုရားကြီး ပျံလွန်​​တော်​မူတဲ့​အ​ကြောင်းကို ဒုလ္လဘဝတ်​​နေတဲ့ ​နေတိုးကြားရင်​ ဘယ်​​လောက်​​တောင်​ ဝမ်းနည်းလိုက်​မလဲ 😔😔😔
October 19, 2018 October 19, 2018 MM Live News37 Comments on ​ကျောက်​ဂူဆရာ​တော်​ဘုရားကြီး ပျံလွန်​​တော်​မူတဲ့​အ​ကြောင်းကို ဒုလ္လဘဝတ်​​နေတဲ့ ​နေတိုးကြားရင်​ ဘယ်​​လောက်​​တောင်​ ဝမ်းနည်းလိုက်​မလဲ 😔😔😔
​အောက်​တိုဘာလ (၃) ရက်​​နေ့မှာ ဘဝတစ်​ပါးသို့ကူး​ပြောင်းသွားတဲ့ သရုပ်​​ဆောင်​နှင့်​ အဆို​တော်​ မင်း​သွေး ကွယ်​လွန်​သွားတာ အခုဆိုရင်​ နှစ်​ပတ်​​ကျော်​ရှိသွားပြီဖြစ်​ပါတယ်​။ မင်း​သွေးကွယ်​လွန်​သွားတာ ရက်​အချို့ရှိ​နေပြီဖြစ်​​ပေမယ်​ ကျန်​ရစ်​သူ​တွေက​တော့ ​သောကပပူမီးကို တရားသ​ဘောနဲ့ နှစ်​သိမ့်​​နေရပါတယ်​။ မင်း​သွေးကိစ္စနဲ့ ပူပင်​လို့မဆုံး​သေးခင်​မှာပဲ ​နောက်​ထပ်​ပူ​ဆွေးစရာအ​ကြောင်းတရားတစ်​ခုက ​ပေါ်​ပေါက်​လာရပြန်​ပါတယ်​။ အဲ့ဒါက​တော့ မင်း​သွေးရဲ့ နာ​ရေးကို ကြွ​ရောက်​​ပေးခဲ့တဲ့ ​ကျောက်​ဂူဆရာ​တော်​ဘုရားကြီးဟာ ​အောက်​တိုဘာလ ၁၈ ရက်​​နေ့မှာပဲ မ​မျှော်​လင့်​ပဲ ကားအက်​ဆီဒင့်​ဖြစ်​ကာ ပျံလွန်​​တော်​မူသွားပြီပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ဆရာတော် ဦးက္ကု.္ဗိန္ဒာစရိယ ဟာ ​အောက်​တိုဘာ ၁၈ ရက်​​နေ့မနက်​ပိုင်း ၉ နာရီ ၅၀ မိနစ်​အချိန်​မှာ ပျံလွန်​​တော်​မူခဲ့တာပါ။ ဆရာ​တော်​လိုက်​ပါစီးနင်းလာတဲ့ ကားက နပတ-မတလ လမ်း မိုင်တိုင် ၃၁၀/၃- ၃၁၀/ ၄ဖာလုံကြားမှာ အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ လမ်းဘေးမြေသားတောင်စောင်းဝင်တိုက်ခဲ့တာဖြစ်​ပါတယ်​။ ဆရာ​တော်​လိုက်​ပါစီးနင်းလာတဲ့ကား ဆရာ​တော်​ဘုရားကြီးဟာ ​အောက်​တိုဘာလ (၈) […]
ယူကရိန်းနိုင်ငံမှ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ ဒါမျိုးတွေတောင် ဖြစ်နေကျပြီတဲ့ဗျာ….
October 19, 2018 MM Live News11 Comments on ယူကရိန်းနိုင်ငံမှ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ ဒါမျိုးတွေတောင် ဖြစ်နေကျပြီတဲ့ဗျာ….
ယူကရိန်းနိုင်ငံမှ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ ဘာတွေလုပ် ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာ ဧကပေါင်းများစွာကျယ်ဝန်းတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းဝန်းထဲမှာ စင်တာတွေ အဆောင်တွေ ဆောက်လုပ်ကြပါတယ် ကလေးကစားစရာ နှင့် ရေကူးကန်ကအစ ဘုန်းကြီးကျောင်းဝန်းထဲမှာရှိပါတယ်။ သူတို့ဆီက ဗုဒ္ဓဘာသာအသိုင်းအ၀ိုင်းတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် တကယ်အားရစရာတွေပါ မိသားစုအားလုံးစုပြီး တနင်္ဂနွေ သို့မဟုတ် ရုံးပိတ်ရက်တွေမှာ ပျော်ပျော်ပါးပါးဘုန်းကြီးကျောင်းသွားကြပါတယ်..ကလေးသူငယ်တွေနဲ့သွားတဲ့အခါ ကလေးတွေပျော်ရွှင်ဖို့အတွက် ကလေးကစားကွင်းကအစ ဘုန်းကြီးကျောင်းဝန်းထဲမှာ ပြုလုပ်ကြပါတယ်… ယူကရိန်းနိုင်ငံက ဗုဒ္ဓဘာသာအချို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားကြတဲ့အခါ မိမိဝါသနာပါရာကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ကြပါတယ်… ဘုရားဆင်းတုတော်ထုလုပ်သည့်ကုသိုလ်ဘုရားဆင်းတုတော်များကို ဆေးချယ်သည့်ကုသိုလ် စေတီပုထိုးများကိုဆေးသုတ်သည့်ကုသိုလ်အဆောင်များကို ပြုပြင်ဆောက်လုပ်သည့်ကုသိုလ် ကျောင်းပုရ၀ုဏ်အတွင်း သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်သည့်ကုသိုလ်တရားထိုင်ရာတွင်အသုံးပြုရန် ထိုင်ခုံတွေပြုလုပ်ကြတယ်စသည်အားဖြင့် ကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ကြပါတယ်.. အချို့ လူသစ်တွေ ဘုရားဆင်းတုတော် မထုလုပ်တတ်သေးဘူးဆိုရင်လူဟောင်း စီနီယာတွေက ဘယ်လိုလုပ်ရတယ် ဘယ်လိုထုရတယ်စသည်အားဖြင့် သင်ပြပေးပါတယ် မလုပ်တတ်သေးတဲ့ လူသစ်တွေက မှတ်ထား၇တယ် တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် (ရုံးပိတ်ရက်) လောက်တော့ စင်တာ (ဘုန်းကြီးကျောင်း)သွားပြီး ကုသိုလ်တွေယူကြပါတယ် […]
ကျောက်​ဂူဆရာ​တော်​၏ရုပ်​ကလာပ်​တော်ထားရှိမူ ​နောက်​ဆုံးရ သတင်းနှင့် ကျောက်ဂူဆရာတော် ဥူးဣန္ဒာစရိယ ၏ ထေရုပ္ပတ္တိအကျဉ်း
October 19, 2018 MM Live News22 Comments on ကျောက်​ဂူဆရာ​တော်​၏ရုပ်​ကလာပ်​တော်ထားရှိမူ ​နောက်​ဆုံးရ သတင်းနှင့် ကျောက်ဂူဆရာတော် ဥူးဣန္ဒာစရိယ ၏ ထေရုပ္ပတ္တိအကျဉ်း
ကျောက်​ဂူဆရာ​တော်​၏ ​နောက်​ဆုံးရ သတင်းနှင့် ကျောက်ဂူဆရာတော် ဥူးဣန္ဒာစရိယ ၏ #ထေရုပ္ပတ္တိအကျဉ်း 18.10. 2018 ​နေ့လည်​ ၂ နာရီ ၂၀ မိနစ်​ ဆရာ​တော်​ကြီး၏ ရုပ်​ကလာပ်​ကို နွားထိုးကြီး​ဆေးရုံမှ ​ဂန့်​​ဂေါ ကန်​​ဒေသ ​ရေထွက်​​ကျောက်​ဂူ​တောရ​ကျောင်းသို့ ​လေယာဉ်​ဖြင့်​သယ်​ရန်​ စီမံကြ​သော်​လည်း ​လေယာဉ်​ကွင်းအခက်​အခဲ​ကြောင့်​ ကားဖြင့်​သယ်​ယူကြမည်​ နေပြည်​​တော်​မှ ဌာနဆိုင်​ရာအကြီးအကဲများ လာ​ရောက်​​နေကြပြီဖြစ်​သဖြင့်​ ​စောင့်​​ဆိုင်း​နေကြသည်​။ ယခုအချိန်​ထိ နွားထိုးကြီး​ဆေးရုံတွင်​ ရုပ်​ကလာပ်​​တော်​ရှိ​နေ​သေးသည်​ နွားထိုးကြီး​ဆေးရုံသို့ ​ရောက်​ရှိ​နေ​သော မန္တ​လေးမြို့ မြ​တောင်​တိုက်​ မဏိစလလူမှု​ကူညီ​ရေးအသင်းသား ​မောင်​​ကောင်း Mg Kaung မှ သတင်း​ပေးပို့သည်​ ​ယောမင်းကြီး Nyo Wlk ကျောက်ဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဆုံးမသြဝါဒ၊ ထေရုပ္ပတိအကျဉ်းနှင့် ဓမ္မဒူတခရီးစဉ် အချို့၏ ပုံရိပ်တို့ကို #ကလေးမြို့မီဒီယာမှ စုစည်းဖော်ပြအပ်ပါသည်။ ကျေက်ဂူဆရာတော် ဥူးဣန္ဒာစရိယ ၏ […]
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ သတို့သမီးပေါက်ဈေးများ…
October 19, 2018 MM Live10 Comments on အွန်လိုင်းပေါ်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ သတို့သမီးပေါက်ဈေးများ…
ကျွန်းလှ -ကန့်ဘလူ သတိုးသမီးပေါက်ဈေးများ ဝါ ဝင်ခါနီးဆိုရင် ဈေးကျတတ်ပါသည် မြို့ပေါ် မိဘချမ်းသာသောသူများ … မိရာဖရာ သိန်း ၅၀ မှ 75 ကြား ပတ်လည် အခန်းဝင် နှစ်ဦးပိုင် အခြေအနေကောင်းလျှင် ရွှေ 5ကျပ်သား နဲ့ အထက် ပိုပေးရတတ်သည် မြို့နားနီး ရပ်ကွက်များ နှင့် ရွာပေါက်ဈေး…. ၁=ဆရာမ၂၀ နဲ့ ၃၀ ကြား ပတ်လည် (၃မိုင်ဝန်းကျင်) (၃မိုင် ပြင်ပ) နွားအကောင် 20 နဲ့ မိရာဖရာ သိန်း၂၀ သတိုးသမီးဘက်က မလိုက်ရ သတိုးသားက ဂျပန်ပြန်ဆို ဈေးပိုပေးရတတ်သည်။ ၂= ရိုးရိုးဝန်းထမ်း ၂၀ နဲ့ ၂၅ ကြား ပတ်လည် တောင်းရေးဆောင်ရေး အပါအဝင် […]
October 18, 2018 MM Live1 Comment on ဒီနှစ် ၁၃၈၀ / ၂၀၁၈ ထဲမှာ ငွေဝင်ထီပေါက် ကံကောင်းမယ့်သူများ….
မြန်မာ့ဆန်းကျမ်းဗေဒင်ပညာရပ်၏ ငွေဝင်ထီပေါက်ကိန်းများထဲမှ ဆန်းဗေဒင်ဆရာကြီး ရန်ကုန်ကျော်ရင်၏ ငွေဝင်ခြင်းထီပေါက်ခြင်း နည်းအရ ယခုမြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၈၀ အတွင်း (17.4.2018 မှ 16.4.2019 အတွင်း) ထီပေါက်ငွေဝင်ကိန်း ရှိမည့်သူများကို နေ့နံ အလိုက် အသေးစိတ် တွက်ချက်ပေးလိုက်ပါသည်။ တနင်္ဂနွေ သားသမီးများ အသက် ၁၄၊ ၂၂၊ ၃၀၊ ၃၈၊ ၄၆၊ ၅၄၊ ၆၂၊ ၇၀၊ ၇၈ နှစ်များကို ဖြတ်သန်းနေသော တနင်္ဂနွေသားသမီးများသည် ထီကံ အလွန် အကျိုးပေးသူများ ဖြစ်ပြီး ထီထိုးသောအခါ တွက်ချက် ထိုးစရာမလို။ ကြုံရာဆိုင်တွင် ထိုးရပါမည်။ အကျိုးပေးဂဏန်းမှာ ၁နှင့် ၃တို့ ဖြစ်သည်။ (ဗေဒင်သုတ – BaydinThyuta) တနင်္လာ သားသမီးများ အသက် ၁၄၊ ၂၂၊ […]